Ireto avy ny anaran’ireo gadra tafatsoaka tao amin’ny fonjaben’ny Tsiroanomandidy ny asabotsy lasa teo :
Naverina faran’izay maika eny Antanimora i Claudine Razaimamonjy. Izy dia nigadra eny amin’ny fonjan’i Manjakandriana raha ny tokony ho izy.
Olo-malaza roa dia i Michael sy Manou izay samy fantatra amin’ny tontolon’ny zava-kanto noho ny nivoahan’izy ireo tamin’ny Pazzapa tamin’izany no voatafika tetsy Mahitsy.
TSY MBOLA NIVOAKA NY VOLA
Tsy mbola nisy vola nivoaka sy nomena ny havan’ireo izay niharam-boina tamin’ny raharaha 7 febroary hatramin’izao.
RAY NAMPIJALY NY ZANANY VAVY
Nidoboka am-ponja ilay raim-pianakaviana izay nampijaly ny zanany vavikely vao valo taona. Nosamborin’ny polisy tao an-tranony izy mivady rehefa nitaraina ny mpiara-monina fa maheno zaza miantso vonjy matetika.
Renim-pianakaviana iray nanindron’antsy teo amin’ny fonin’ny vadiny ka nahafaty ity farany, ny alin’ny 3 febroary tany Ambodimanga , Andapa.
Mitaraina ankehitriny ireo mponina eny Ambohimirary eny noho ny fahatapahan-drano efa ho 2 andro mahery izay.
Anisan’ny mampanahy ny sasany amin’ireo mponina ho anton’izao zava-misy izao moa ny fanapahan-kevitra izay nitranga nandritry ny fandinihana ny tetibolam-panjakana farany teo izay mitaky ny fampihenana ny famatsiambola ny orinasa Jirama.
9 andro mialoha ny fifidianana fihodinana faharoan’ny fifaninanana ho filohan’ny repoblika dia nanome fanampim-panazavana mikasika ny karatry ny mpifidy ny avy eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI. Tetsy Nanisana moa no nanatontosana izany omaly.
Mahakasika izay hatrany dia nanamafy ny avy eo anivon’ny prefektioran’Analamanga fa ho hentitra kokoa noho ny tamin’ny fihodinana voalohan’ny fifidianana ho filoham-pirenena ny fitandroana filaminana amin’ny fihodinana faharoa. Mampanahy, hoy ny fanazavana, ireo fifandrangitana sy fihantsiana mitranga.